Ungaita sei yekutaurisa musoro wenyaya pamwe nekambani chiitiko? | ECommerce nhau
Ungaita sei yekutaurisa musoro wenyaya pamwe nekambani chiitiko
Jose Ignacio | | eCommerce, Zviitiko
Sezvo iwe uchizoziva kwazvo kwazvo, kuve inofambiswa nhaurwa inonyatso kureva maitiro, zvishoma kana zvishoma kupfuura, izvo zvinoratidza iwo musoro wenguva, muchiSpanish. Icho chikamu cheimwe cheanonyanya kudzokororwa mazwi kana zvirevo panguva yakatarwa pasocial network. Kusvika padanho rekuti inogona kuteverwa nezviuru nezviuru zvevashandisi kuburikidza neaya matsva nzira dzekutaurirana.
Asi zvichave zviri nyore kwauri kuti iwe uzive kuti nekuve iri nyaya iri kufambiswa pasocial network unogona kusimbiswa munzvimbo dzako chaidzo. Asi pamwe izvo iwe zvausingazive ndezvekuti zano iri rinogona zvakare kubatsira zvakanyanya kune yekambani chiitiko kutangisa kana kunyangwe kuburitsa chigadzirwa, sevhisi kana chinyorwa. Nekuti iyo michina yakanyanya kana kushoma yakafanana uye iwe uchafanirwa chete kuiisa kune inova yemubatanidzwa chiitiko.
Tichatsanangura kuti kuita nhaurwa inoteedzana nechiitiko chekambani kunogona kuve nyore kupfuura zvaunogona kufunga pakutanga. Kusvikira pakuimisikidza zvakare sezvawaisagona kufungidzira kusvikira zvino. Hazvishamise kuti iri zano mukuronga kwekambani iro riri kuwedzera kushandiswa nevehunyanzvi. Iwe haugone kukanganwa kuti zvinoshanda, zvese pazvinhu zvemunhu uye zvepedyo uye zvevatengesi kana zvine chekuita nebasa rako rehunyanzvi.
1 Nyaya yekufamba-famba inoshandiswa sei muchiitiko chemubatanidzwa?
2 Matipi ekumisikidza mafambiro pasocial media
3 Matanho ekutaurirana mumasocial media
Nyaya yekufamba-famba inoshandiswa sei muchiitiko chemubatanidzwa?
Kune vatungamiriri mune iyi mhando yemafambiro, iwe unenge usina imwe sarudzo kunze kwekusimudzira nhevedzano yekusiyana maererano nekutungamira kwemaakaundi ako ega pasocial network. Ndokunge, fomu racho rakafanana, kunyangwe zvakadzika pasi pane misiyano yakakura yekuti iwe uwane zvinangwa zvako zvaunoda. Kubva pane akajairika mamiriro, iwe unofanirwa kuziva kuti kuve inoteedzera nhaurwa pachiitiko chekambani kunosanganisira kushandura meseji.
Ndichiri kune rimwe divi, usakanganwa kubva zvino zvichienda mberi kuti zano iri rinogona kupa akateedzana hunhu husingatombofanirwa kushayikwa mune yemubatanidzwa kana bhizinesi chiitiko. Semuenzaniso, kuburikidza nezviito zvinotevera zvatinokufumura:
Iwe unogona kusimudzira kuvapo kwemhando idzi dzezviitiko uye kuti vanhu vari kuzotora chikamu mazviri vanoziviswa.
Wana kuoneka kukuru uye kubva pane ino maonero zvinokubatsira iwe kuwana mukurumbira wakawanda uye kuzviisa pachezvako zvirinani muchikamu. Uye zvakare, inogona kuve chishandiso chakasimba kwazvo chekuzvitsauranisa kubva pane zvinotaurwa nemakwikwi.
Izvo zvakakosha kuti iwe usazvikwanise iwe kune wega wega uye anotamba masocial network. Kana zvisiri, pane kudaro, une musengwa wekutora mukana weavo vane hunyanzvi uye mune ino pfungwa Linkedin kuvapo kwakanaka kwerudzi urwu rwemashoko.
Kana iwe uri chaicho chinofambidzana nhaurwa, hapana mubvunzo kuti yako yemakambani kana yehunyanzvi chiitiko chichava nezviitiko zvakanyanya kupfuura kusvika zvino. Kwete chete kubva kune yako pega maonero asiwo kubva kune yehunyanzvi nzvimbo yekutarisa iri kumagumo ezuva.
Nekugadzira maitiro, kambani inogona kucherechedzwa nekukurumidza uye nekudaro kupinza hurukuro inomunongedzera. Ndokunge, kuvapo kwako kuchange kuri mune inoshanda nzira uye kunogona kuunganidza kufarira kwemamwe makambani kana nyanzvi.
Chimwe chezvinhu izvo vasingazive nevazhinji nyanzvi mune ino chikamu ndechekuti inogona kugadzirisa iyo branding. Neichi chikonzero chega zvakakosha kuedza kuyedza iyi zano mukutungamira kwechiitiko chehunyanzvi.
Ichokwadi kuti ino system kusvika kune vakawanda vatengi kana vashandisi inowedzera mukurumbira wechiratidzo. Asi chenjera chaizvo neichi chinhu nekuti kuti izvi zvive zvakadaro panofanirwa kusarudza chaiyo maitiro. Dai zvisiri izvi, ziva chokwadi kuti mhedzisiro yacho inogona kuve inopesana neizvo zvauri kutsvaga kubva ikozvino zvichienda mberi.
Hapana mubvunzo kuti imwe yemipiro yayo mikuru ndeyekuti iyo inokutendera iwe kusangana zviri nani nemazita. Iwe unoda kuziva here kuti mhedzisiro yacho ndeipi? Zvakanaka, pakupedzisira pachave neakakura kusvika pakati pevateereri uye chinhu ichi chinogara chakanakira kambani yako.
Ipo pakupedzisira, iwe haufanire kukanganwa kuti iyo inofambidzana nhaurwa ndeye shure kwechimwe chinhu icho munhu wese anotaura nezvacho uye anonyora nezvacho. Ndokunge, zvichabatsira nzvimbo yako kuti inyatsoita basa uchienzaniswa nemamwe maitiro ekupfuura ezviito.
Matipi ekumisikidza mafambiro pasocial media
Yasvika nguva yekuti iwe uzive zvaunofanira kuita kuti uve yenyaya inoyerera mumameseji pasocial network. Nezve zviitiko zvekambani iwe zvauri kuzoronga kubva zvino zvichienda uye izvo zvinogona kukupa rakakura rubatsiro mukuonekwa kwavo. Iko pasina kupokana kuti imwe yekiyi ichagara mukutonga kwemasocial network kana tichinyatsoda kuve yemaTraffic Topic.
Iwe unoda kuziva here kuti ndeapi mamwe emazano akakosha aunogona kushandisa? Zvakanaka, nyatsoteerera nekuti ungavade pane imwe nguva mune yako nyanzvi chiitiko.
Chekutanga pane zvese, iwe uchafanirwa kutsanangudza masocial network iwe auchazoda kuti uite iri rakakosha basa rehunyanzvi. Neraki, iwe une zvakawanda zvinotsigira uye zvemhando dzakasiyana hunhu, pakati padzo zvinotevera kumira izvo zvatinotaura pazasi:
Twitter, Youtube uye Facebook, You Tube, Media Quizzes, Linkedin ...
Mune ese mairi unogona kugadzira maitiro, asi zvichave zvakakosha kuti ukoshese mashandisiro ayo kuitira kuti ienderane nemameseji kana zvemukati izvo iwe zvaunoda kuvhura kutsigira chiitiko cheaya maitiro.
Iko kuburikidza nekushandisa hashtag mune chiitiko iwe unogona kuburitsa kusangana kukuru pakati pechakanaka chikamu chevashandisi.
Matanho ekutaurirana mumasocial media
Tumira yakakwira-inogunzva zvemukati
Semuenzaniso, kuburikidza nema tweets ane mifananidzo kana kungoitazve zvekare. Pakati pechiitiko chaunopemberera, iwe unogona kushambadzira mafoto, mapato, network uye chero imwe mhando yeruzivo inotsigira inoenderana nechiitiko.
Mavhidhiyo mapfupi uye nhepfenyuro mhenyu dzechiitiko zvinonyanya kushanda kuti iwe uzadzise zvinangwa zvako kubva zvino zvichienda mberi. Kunyanya kana ivo vakatsigirwa neinonyanya kukurudzira zvemukati maunogona kunyange kukurudzira vamwe vanhu kuti vagovane zvavo zviitiko uye ndangariro.
Kumbira kubatana kwevanokurudzira
Zviri pachena kuti iwe unoda idzi nyanzvi dzekutaurirana kusimudzira chiitiko chekambani kuitira kuti igone kukanganisa vamwe vatengi kana vashandisi. Mupfungwa iyi, usakanganwa kuti vanokurudzira vanogona kutsika nhaurwa nerusununguko rwakakosha kubva kunetiweki yekutandarira. Hazvishamisi kuti ndechimwe chezvinangwa zvavo zvikuru uyezve ivo havazokuodza moyo iwe mune basa rakaitwa.
Gadzirira zvemukati zvinoratidzira zvemukati zvemavhidhiyo
Imwe nzira yakakosha inoenderana nechimwe chinhu, chakakosha sezvo chiri nyore, sekukurudzira vamwe vashandisi kuti vakwanise kuita hashtag kutaurwa kubva chero kupi. Uye kana ivo vachiperekedzwa navo ese uye mavhidhiyo, saka zviri nani zvakanyanya kune yako nyanzvi kufarira. Chero chii zvacho chinongedzo chinogona kuve chakakosha kusimudzira kuvepo kwekambani kana chiitiko chebhizinesi. Izvo hazvina basa kuti ndeipi chikamu, asi zvinopesana, chinonyanya kukosha kuparadzirwa kwayo ndechekuti kumira kwayo kunogara kuri kukuru uye kuchikwira.
Geolocate ma tweets ako
Iwe haugone kukoshesa zvakanyanya chinhu ichi, asi pakupedzisira zvichave zvakakodzera kuzviisa mukuita kubva ikozvino zvichienda mberi. Chimwe chezvikonzero zvekutora danho iri ndechekuti iyo nzvimbo muma social network inoita kuti igadziriswe zvakanyanya geolocation uye inobvumidza kumisikidza zvirinani zvinyorwa kana zvemukati.
Isa zano iri mukuita mukushambadzira kwedhijitari, hapana mubvunzo kuti rinokutendera iwe kuti chiitiko chako chive musoro wenyaya. Kuti nenzira iyi, iwe ugone kubatana uye nekugovana neavo vari pachiitiko chako.
Iyo inzira inoshamisa kwazvo yekupa yese nhau nezve kusimudzira kwechiitiko ichi mumunda wekambani. Iine chinzvimbo chiri nani kubva pane ese maonero ekushambadzira kwedigital
Ehezve, iwe unogona kuzvimisikidza iwe kune zvakasarudzika zviito, senge kushandisa nemazvo kushandiswa kweiyo hashtag uye mufananidzo wechiitiko. Izvi zviito zvinogona kukwana kuzadzisa zvinangwa zvako munguva pfupi.
Iwe unogona kuronga aya mabasa kubva zvino zvichienda mberi kuitira kuti iwe uve nenguva yakawanda yekuita hurukuro dzepamoyo nezve kuvandudzwa kwemhando dzese dzezviitiko.
Sezvaungave iwe wakamboona, iwo mubvunzo nezvekuti ungave sei unoenderera wenyaya nechiitiko chekambani unogona kukupa mhinduro zhinji idzo kusvikira zvino dzaive dzisingazivikanwe pachikamu chako. Iwe unongofanirwa kushambadzira maitiro aya nekugona kukuru uye kuti zvinangwa zvako zvinokwanisika kuburikidza nesocial network. Uine moyo murefu uye kuva neakawanda mahunyanzvi ehunyanzvi, iwe unenge wakagadzirira zvakakwana kuisa pamwechete rine simba basa chishandiso kubva ikozvino zvichienda mberi. Ehe ichangove nyaya yenguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Ungaita sei yekutaurisa musoro wenyaya pamwe nekambani chiitiko
Nzira yekugadzira nhoroondo yekambani paLinkedin?
Maitiro eNeuromarketing anoshanda kune eCommerce